dopamine အချက်ပြခြင်းတွင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည် ဦး နှောက် prefrontal cortex ရှိမျိုးဗီဇ ၂၀၀၀ ၏လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေပါသည် (၂၀၁၄) - Your Brain On Porn
dopamine အတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအလှနျဦးနှောက် prefrontal cortex (2,000) ခန့် 2014 မျိုးဗီဇ၏လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ကိုပြောင်းလဲအချက်ပြ
UCI မှ Emiliana Borrelli က“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါတွေကိုနားလည်စေတဲ့နည်းလမ်းသစ်တွေကိုပြသပေးတယ်။
UC Irvine သိပ္ပံပညာရှင်များအဆိုအရ dopamine အချက်ပြခြင်းတွင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည် ဦး နှောက်၏ prefrontal cortex ရှိမျိုးဗီဇ ၂၀၀၀ ၏လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေပြီးအချို့ရှုပ်ထွေးသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲတချို့ ဗီဇလှုပ်ရှားမှု in ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေ ဒီ neurotransmitter ခံယူ dopamine ချို့တဲ့အပြုအမူအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြ ဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာ ထဲမှာစည်းမျဉ်းသတ်မှတ် prefrontal cortex.
အမ်ဂျလီနာ Borrelli ဦး ဆောင်သောလေ့လာမှုသည် UCI ပါ ၀ င်သည့် microbiology & molecular genetics ၏ဂျာနယ်တွင်အွန်လိုင်းပေါ်လာသည်။ Molecular Psychiatry.
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါတွေကိုနားလည်စေတဲ့နည်းလမ်းသစ်တွေကိုပြသပေးတယ်" ဟု Borrelli ကပြောကြားခဲ့သည်။ ယခင်က schizophrenia နှင့်ဆက်စပ်သောမျိုးဗီဇများသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိတိကျသောနေရာများတွင် dopamine ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပေါ်မှီခိုနေပုံရသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကဒီလေ့လာမှုက Dopamine အဆင့်ဆင့်ဟာ DNA ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုမရှိပေမယ့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုမှတဆင့်ဗီဇလှုပ်ရှားမှုကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ”
Dopamine လှုပ်ရှားမှုကနေစိတ်ခံစားမှုအထိလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့အခြို့သောဦးနှောက် circuitries အတွင်းပြုမူတဲ့ neurotransmitter ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ dopaminergic စနစ်အပြောင်းအလဲများသိမြင်မှု, မော်တာ, ဟော်မုန်းများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြသည်။ dopamine အချက်ပြများတွင်အလွန်အကျွံဥပမာ, အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါရောဂါလက္ခဏာတွေများအတွက်ခလုတ်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
Borrelli နှင့်သူမ၏အဖွဲ့သည် dopamine အချက်ပြနှောင့်နှေးခဲ့လျှင်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုနားလည်ချင်တယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုသူတို့မရှိကြကြောင်းကြွက်ကိုအသုံးပြု dopamine receptors အခြေခံကျကျစညျးမဉျြးစညျးကမျး dopamine ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိထိခိုက်ထားတဲ့ midbrain အာရုံခံအတွက်။
အဆိုပါသုတေသီများအထူး prefrontal cortex အတွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ distal က်ဘ်ဆိုက်များမှာ dopamine လက်ခံရရှိအာရုံခံ၌ဤအဲဒီ receptor mutation အလှနျပြောင်းလဲဗီဇစကားရပ်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လျှော့ဗီဇလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်အထူးသဖြင့်သူတို့အား - Borrelli သူတို့ histones ဟုခေါ်တွင်အခြေခံ DNA ကိုပရိုတိန်းများပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအတွက်ကျယ်ပြန့်များပြားလာနှင့်အတူ coupled ဤဒေသရှိအချို့ 2,000 မျိုးဗီဇ၏စကားရပ်အဆင့်ဆင့်အတွက်ထူးခြားတဲ့ကျဆင်းခြင်း, လေ့လာတွေ့ရှိကဆိုသည်။
Borrelli နောက်ထပ် dopamine အဲဒီ receptor-သွေးဆောင် reprogramming ဟာ ​​Mutant ကြွက်တွေမှာ psychotic ကဲ့သို့သောအပြုအမူမှဦးဆောင်ကာ dopamine Active နှင့်အတူကြာရှည်ဆေးကုသမှုတဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှကုထုံးချဉ်းကပ်ဖို့ညွှန်ပြပုံမှန်အချက်ပြပွနျလညျထူထောငျကွောငျးမှတ်ချက်ချသည်။
အဆိုပါသုတေသီများသည်ဤအလုပ်မဖြစ် dopamine အချက်ပြခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်မျိုးဗီဇသို့ပိုပြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရရှိနိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့အလုပ်ဆက်လက်နေကြသည်။